Idzi ndidzo dzese nhau dzakabatanidzwa muIOS 10 beta 2 | IPhone nhau
Nezuro masikati, mumaawa ayo akajairwa, Apple yakatanga iOS 10 beta 2. Senge pese pavanovhura beta yeimwe vhezheni x.0, iyo nyowani beta yeIOS 10 inosanganisira shanduko zhinji, kumwe kunoshamisa uye kumwe kunogadzirisa bhagi raivapo mushanduro yapfuura. Muchikamu chino unogona kuona ese nhau eIOS 10 beta 2, kana zvirinani zvese zvatakawana kubva nezuro masikati / husiku kuSpain.
Ndisati ndatanga, ndinoda kutaura kuti zvidzitiro zvemu post izvi zvakatorwa kubva ku iPad nekuti izvozvi zvinoita senge zano rakanaka kurishandisa pa iPhone yangu nekuti ndinovimba nazvo zvimwe zviitiko. Pamwe ndichaisa iOS 10 pane yangu iPhone zvakare pavanoburitsa yeruzhinji beta, iyo inogona kunge iri mumavhiki maviri. Pazasi iwe une iyo runyora rwemashoko inosanganisirwa muIOS 10 beta 2.
Chii chitsva muIOS 10 beta 2
Headphone port iri kushanda zvakare (dambudziko remunhu).
Paunenge uchitora skrini, chishandiso hachiende kunorara (dambudziko remunhu).
Tinogona kuteedzera nekukweva chigunwe kubva kuShift kana kuisa manhamba tisina kusimudza munwe (dambudziko remunhu).
Sarudzo nyowani mukati meMessage application kurodha pasi inoenderana software kubva kuApp Store.
Iyo App Store inotsigira kupatsanura skrini pane iyo Pro Pro.
Yakagadziridza bhatani re "Sefa" muMeyili.
Iko shanduko yekuchinja pakati pemakuru uye epamberi makamera akawedzeredzwa
Kubvira kwekubvisa iyo Noticias (Nhau) kunyorera, chimwe chinhu chisingadiwe munyika dzakaita seSpain 😉
Sarudzo yekutumira iyo mifananidzo mune yakaderera resolution neMessage yekuchengetedza data.
Sarudzo nyowani paunenge uchimanikidza iwo ma tabo icon mu Safari kuvhura iyo nyowani tebhu.
Kuvhura iyo Auto Kuvhura chimiro pane Mac inozo gadziridza otomatiki mu macOS Sierra.
Paunenge uchikumbira Siri, ikozvino waona diki yemifananidzo iyo inodzikisira mashandisiro atiri (kana yekumba skrini).
Ikoni yeKeKKit yakashandurwa muDirect Center uye mumigadziriro.
Izwi idzva rekhibhodi rinonyangarika. Izwi rekare rakadzoka.
Uchishandisa 3D Kubata pane dhairekitori repamba chidzitiro ikozvino inoratidza mabhaluni nemaapp. Yaimbove inoratidza kuwanda kuverenga.
Sarudzo yekudzima AirDrop ikozvino "Kugamuchirwa Akaremara".
Iyo yekumira mukati meiyo Clock app inoenda digital zvakare.
Saizi yemavara ikozvino iri pa Zvirongwa / Ratidza uye kupenya.
Mafaira emifananidzo akagadziridzwa zvishoma.
Mafolda ave pachena kwazvo.
Iye zvino isu tinokwanisa zvakare kuwana iwo majeti kubva kuNetification Center nekutsvaira kurudyi.
Iyo Apple TV icon mune iyo AirPlay sarudzo dzeControl Center yashandurwa.
Yakatumidza zita rekuti "Dhawunirodhi Mumhanzi" chikamu kuva "Zviratidziro" mukati meMusic application.
Zvinyorwa zvidiki muMusic app.
Mamepu anosanganisira sarudzo ye "Ratidza Yakapakwa Mota" pamwe netsananguro yekuti chinhu ichi chinoshanda sei.
Mifananidzo nyowani uye zvinyorwa zvakagadziridzwa zvetsva 3D Kubata zvimiro.
Sarudzo yekungoridza mimhanzi inowanikwa zvakare.
Zvino, kana isu tavhura chishandiso tisina kupinda kumba skrini, tichaona chinyorwa chinoti "chakazarurwa".
Iyo nzvimbo munhoroondo yekufona yakawedzera zvishoma.
Yechitatu-bato majeti anotaridzika zvirinani, pasina kubviswa.
Iyo «Mhinduro» application inowanikwa kune vamwe vashandisi.
Iko otomatiki kukiya sarudzo ikozvino iri mu "Ratidza uye kupenya".
Mamwe maDigital 3D anoshanda anoshanda pane zvishandiso zvisina 3D Kubata skrini kana tichiita muchina wakareba.
Kazhinji nzvimbo dzave kuratidzwa paMepu.
Wakawedzera "Nyowani Chiziviso" sarudzo seiyo 3D Bata ipfupi muManyorerwo application.
Yakavandudzwa kumhanya uye kugadzikana kwesisitimu.
Apple yakati muWWDC yapfuura kuti beta yeruzhinji yeIOS 10 yaizosvika muna Chikunguru. Gore rakapera rakabatana neBeta 3 yevagadziri, vhezheni iyo, kana ikaburitswa mumazuva ekupedzisira (uye kwete senge yechipiri beta) ichasvika vhiki raJuly 18. Iyo yekupedzisira vhezheni ichasvika muna september.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Idzi ndidzo dzese nhau dzakabatanidzwa muIOS 10 beta 2
Rakanakisa ruzivo ndatenda. Mune mamwe mawebhusaiti ivo vakangozvipira pachavo kuisa nhau dzeios 10, uye kwete iyo yeiyi beta.
Pindura kuna juanyoyohmenendez
Uye kana ivo vachisimudza mashandiro anoita iyo 'kwatinopaka' inoshanda 😀
Nhau huru kuparara, sekutaura kweiye-we-wemhando shamwari.
Ndakaisa uye ndokuisunungura zvakare.
Iko kutadza kukuru kwakave yangu iPhone ndeyekuti zviziviso hazviuye nemazvo, kunyanya muMessage.
Nekudaro Apple Music yakawedzera mamenu ayo uye ikozvino inogona kushandiswa zvakajairika, kuita zvakawanda hakusati kuri kundandama, iyo yekuvharira skrini inowedzera mvura mune ese marongero ... Uye zvimwe zvimwe zvandisingapinde mazviri.
Kwakanaka kwazvo kutumira, kwaziso.
Iwo maforodha haatomboita opaque izvozvi?
PS: Ndinovimba kurira kweiyo beta 1 keyboard ichadzoka ...
Batanidza kurodha ichangoburwa beta2 yeIOS 10 ndapota
Ndinonakidzwa neNews app kuSpain. Rarama kwenguva refu kuputswa kwetirongo !!!